INdlondlo neseluleko esinqala esizweni - Bayede News
INdlondlo neseluleko esinqala esizweni
NaseDumbe kuyakhalwa bathi bacela iKhomishani
UMnguni Omnyama weluleke iSishayamthetho kanye nesizwe jikelele ngokumeke kwenzeke ezikhathini ezinzima
NJENGOKWEJWA-YELEKILE ilanga laseMgungundlovu beliphumile kanjalo namalungu eSishayamthetho kanye nawomphakathi abenze njalo ukuzonanela inkulumo yaminyaka yonke yeSILO yokuvulwa kweSishayamthetho saKwaZulu-Natal. Lo mcimbi oyinqaba kutholwa ulandela ukulawula komthetho weSifundazwe othi ISILO njengeNhloko yesizwe kumele kube yiso esenza lo msebenzi. Kulo mcimbi odle ngegqephu uMnguni Omnyama wethula inkulumo yosuku ebiyande ngezeluleko ezibhekiswe emalungwini nasesizweni. Le nkulumo (ngosuku olulandelayo) ilandelwa yinkulumo kaNdunankulu WesSifundazwe yena osuke ethula inkulumongqangi eba ngumbiko walokho okwenzekile onyakeni kanye nalokho okuhlelwe ukuba kwenzeke.
Sethula inkulumo yaso ngoLwesibili iSILO siphawule ngobumqoka bokuqoqa umlando weSishayamthetho ikakhulukazi amagalelo abaholi asebe bedlula kuso kusuka ngonyaka we-1994. “Somlomo ngiyethemba iHhovisi lakho ngeke lisenzele phansi ngokuthi lingayiqophi imisebenzi yala malungu engikhuluma ngawo kanye nalawo asalandulela leli kanye nalawo asathatha umhlalaphansi noma aya kweminye imikhakha. Kungayishwa ukuthi izizukulwane ezizayo zingawazi umlando namagalelo afana namalungu ale Ndlu angasekho afana noMhlonishwa uDumisani Makhaye, uMntwana uGideon Zulu, inkosi uHulumeni Gumede, inkosi uKhayalethu Mathaba, inkosi uMhlabunzima Hlengwa, uMhlonishwa uJoseph Dududu Mkhwanazi, uMhlonishwa u-Amichand Rajbansi, uMhlonishwa uSamuel Nkosiyezwe Mthethwa, uMhlonishwa uMfundisi uCelani Mthethwa.”
Kasigcinanga lapho ngoba kulabo abasadla anhlamvana sithe: “Kanti kulaba abasaphila sekungawukwenzela phansi umphakathi waKwaZulu-Natal uma le Ndlu ingagcini nje ngokuqopha amagalelo amalungu ayo afana noMhlonishwa uRoger Burrows, inkosi uBonga Mdletshe, uDkt uFrank Mdlalose namanye amaningi edlula lapha enza umnikelo. Lokhu engikushoyo kumqoka ngoba ikhona ingozi uma izakhiwo ezifana nale Ndlu zehluleka ukuqopha umlando omqoka osuka ngonyaka wenkulungwane namakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye nane kuze kube yimanje. Uma lokho kungenzeka kungasho ukuthi izizukulwane ezizayo zaKwaZulu-Natal zingalahlekelwa yiminyaka engamashumi amabili nanye yokusebenza kweSishayamthetho sazo.”
Khona lapho iNdlondlo yeluleke uNdunankulu uSenzo Mchunu kanye noHulumeni ukuba uwasebenzise amakhono alabo asebathatha umhlala phansi eminyangweni: “Lo mlayezo ngiyawedlulisa nakuwe Ndunankulu uMchunu ukuthi nakuHulumeni wakho ubheke izisebenzi ezathatha umhlalaphansi ubuke ukuthi angeke yini zilekelele ekucijeni lezo ezikhona manje. Baningi othisha, abahlengikazi ngisho nalabo ababesebenza emahhovisi njengabaphathi nomabhalane abangenza umnikelo omangalisayo ekuqiniseni ukusebenza kukaHulumeni wakho. Ngisho njalo nasezinhlankeni zoBukhosi ngoba usukhona umkhuba wokuthi uma sekubekwa abantu abasha bese kuthiwa abadala kabahambe bonke. Kunjalo nakulaba abasethulela izindaba emsakazweni nasemaphephandabeni ethu uyabona ukuthi ifeshini sekuyiyo le yokukhomba indlela okudala kuhlotshwe ngokusha. Iqiniso lithi alikho izwe lezingane zodwa, lingekho futhi nezwe labantu abadala bodwa. Kepha elikhona ngelabadala nabancane, abesifazane nabesilisa abasebenza ngokubambisana.“
Odabeni lokuklwebhana kwezinhlanga okuqhubekayo kuleli ISILO seluleke ngokuthi abantu kabayeke ukubekezelelana kunalokho bamukelane.
“Njengomzali kubuhlungu kuyankenketha ukubona nokuzwa amalungu omndeni wethu ehlaselana, egxibhana esebenzisa ubandlululo njengesikhali sokuphebeza labo ongabafuni kanye nokuchaza lokho okubaphathakabi. Akwehli kahle ukubona amalungu ezinhlanga ezahlukene akha umndeni waseNingizimu Afrika ebuyela ezinkambini zawo zasendulo zobandlulo njalo uma kukhona okungahambi kahle. Iqiniso okumele sonke silamukele ngelokuthi kawukho umndeni ongathuthuka uma ungenayo inkonzo yokuxolela nokwedlulisa.
Eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili izwe lethu lahlelwa kabusha ngibona sesifikile isikhathi sokuthi izinhlanga ezehlukene kuleli zedlule ekubekezelaneni kepha ziye ekwamukelaneni. INingizimu Afrika ichithe isikhathi eside yenza lokho okulukhuni nokuthatha isikhathi okuwukubekezelelana. Ngokwenza njalo siyeke ukwenza okulula nokusheshayo okuwukwamukelana.”
Siqhube sathi: “Empeleni asikho isidingo sokuthi owomdabu waseNdiya abekezele ukuthi kukhona amaZulu kepha kumele akwamukele ukuthi lokho njengeqiniso. Asikho isidingo sokuthi amaKhrestu abekezele ubukhona kwabenkolo yobuHindu noma yobuNazaretha kunalokho kumele lokho akwamukele njengeqiniso. Labo abathi bamele amalungelo abantu abayeke ukubekezela ukuthi kukhona iMikhosi kaZulu efana noMkhosi woMhlanga kunalokho abakwamukele lokho njengeqiniso ngoba izintombi zoMhlanga zisazowuletha uMhlanga eNyokeni nakulo nyaka nakweminye ezayo. Asikho isidingo sokuthi kube khona ababekezela ukuthi kukhona isizwe samaBhunu KwaZulu-Natal kunalokho wonke umuntu kumele lokho kumele akwamukele njengeqiniso lomlandowethu. Kanjalo namaNgisi kumele angabekezelelwa kepha amukelwe,” kuphetha iSILO.
nguMfo waKwaNomajalimane Feb 26, 2016